Ciidamada Puntland iyo Somaliland oo madaafiic isku-weydaarsaday deegaanka Tukaraq - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCiidamada Puntland iyo Somaliland oo madaafiic isku-weydaarsaday deegaanka Tukaraq
January 3, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Gaari tikniko ah oo ay leeyihiin ciidamada Puntland. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada Puntland iyo kuwa Somaliland ee ku sugan deegaanka Tukaraq ayaa maanta oo Khamiis ah is-weydaarsaday madaafiic, sida ay wararku sheegeen.
Ilo-wareedyo katirsan ciidamada Puntland ayaa bog wareedka Puntland Mirror u sheegay in ciidamada Somaliland ay dhowr madfac ku soo rideen dhankooda, halka iyana ay ka jawaabeen oo dib ugu ganeen madaafiic kale.
Ma jirto wax khasaare ah oo ka dhashay is-weydaarsiga madaafiicda maanta, sida ay ilo-wareedku sheegeen.
Puntland iyo Somaliland ayaa ciidamadoodu dagaalo ku dhexmareen deegaanka Tukaraq sanadkii lasoo dhaafay.
Labo dagaal oo dhacay bishii May ee sanadkii 2017 ayaa dhaliyay khasaraaha tobonaan ciidan oo katirsanaa labada dhinac.
Labada dhinac ayaa ciidamadoodu isku hor-fadhiyeen deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool tan iyo xilligaas.
Mogadishu-(Puntland Mirror) A Somali female MP Samira Abdulle survived when a roadside bomb struck her car in Mogadishu this evening, security sources said. According to the sources, at least one of her guard was injured [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Lix dagaalyahan oo katirsan maleeshiyada ISIS ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday Buuraha Golis ee Puntland, sida Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ay bayaan ku sheegeen Arbacadii. Duqeynta ayaa dhacday Talaadadii, sida ay [...]